विवाह पछि सिन्दुर र रातो पहिरनमा यस्ती देखिइन् ऋचा शर्मा « Etajakhabar
विवाह पछि सिन्दुर र रातो पहिरनमा यस्ती देखिइन् ऋचा शर्मा
प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०७६, बुधबार १३:४७
काठमाडौं, २५ मंसिर । गत शनिवार विावह बन्धनमा बाँधिएकी अभिनेत्री ऋचा शर्माले आफ्नो विवाहको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन् । दुई वर्षको प्रेम सम्बन्ध पछि उनले प्रेमी दिपेक्ष विक्रम राणासँग विवाह गरेकी हुन् । सिमित सिने कलाकार र आफन्तबीच उनको विवाह सम्पन्न भएको छ । लामो समय फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय रहेकी ऋचा लबिम मलका म्यानेजर दिपेक्षसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी हुन्।
उनीहरुले सिमित चलचित्रकर्मी र परिवार जमघटकाबीच विवाह गरेका हुन्। विवाह अघि पनि ऋचाले केही सिमित साथीहरुसंग पोखरामा ब्याचर पार्टी गरेकी थिइन् । उनको ब्याचलर पार्टीमा केकी अधिकारी, प्रियंका कार्की लगायतका नायिका पुगेका थिए । विवाहमा पनि थोरै चलचित्रका कलाकारहरु मात्र सहभागी थिए । विवाहमा रिमा विश्वकर्मा, केकी, रेखा थापा लगायत सहभागी भएका थिए ।
विवाह गरेसँगै ऋचाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विवाहका तस्विरहरु सार्वजनिक गरिरहेकी छिन्। हालै ऋचाले शेयर गरेको तस्विरमा उनी रातो पहिरन र सिन्दूरमा सजिएकी देखिएकी छिन्। २१ गते विवाह बन्धनमा बाँधिएका यी जोडीले २६ गते बिहिवार ठमेलस्थित अलफ्ट होटलमा चलचित्रकर्मी, आफन्त तथा मिडियाकर्मीहरुको लागि ुरिसेप्सन पार्टीु आयोजना गर्दै छन्।
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार २६ गते शुक्रबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल !
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल असार २६ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२० जुलाई १०
काठमाण्डौंमा घटेका यी ५ अनौठा चोरीका घटना, जसले प्रहरीलाइ समेत हैरान पार्यो !
काठमाण्डौ – नेपाल प्रहरीले आफूलाई प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भन्दै ध’म्काउने र चोरी गर्ने एक
सिन्धुपाल्चोकलाइ फर्केर हेर्दा : प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनाको उच्च जोखिममा सिन्धुपाल्चोक !
आदित्य दाहाल – सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनाको उच्च जोखिम बन्दै गएको छ ।
पुजाले आफ्नै कमाईले काठमाडौंमा घर ठड्याउँदै,कुन चलचित्र बाट कती कमाइन र पुजाले ? (भिडियो हेर्नुहोस)
सन् २०१६ मा प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘प्रेमगीत’ भन्दा अगाडि अभिनेत्री पूजा शर्मालाई अपवादले मात्र चिन्थे
२५ असार २०७७, बिहीबार २२:००
२५ असार २०७७, बिहीबार २१:२०